आँधीखोला खवर | स्याङजाको वालिङमा एम्वुलेन्स दुर्घटना,दुई जनाको अवस्था गम्भिर ! - आँधीखोला खवर स्याङजाको वालिङमा एम्वुलेन्स दुर्घटना,दुई जनाको अवस्था गम्भिर ! - आँधीखोला खवर
स्याङजाको वालिङमा एम्वुलेन्स दुर्घटना भएको छ । काठमाण्डौंबाट चापाकोट जाँदै गरेको एम्वुलेन्स वालिङ ७ र वडा नम्वर ५ को सिमाना माझकोट/सोतीलाङमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो ।
चार जना सवार एम्वुलेन्समा दुई जनाको अवस्था गम्भिर रहेको र उनीहरुलाई थप उपचारका लागि उद्धार गरी पठाईएको वडा नम्वर ७ का अध्यक्ष पाण्डुकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो । एम्वुलेन्स सडकबाट झण्डै ४ सय मिटर तल झरेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो ।
एम्वुलेन्स नम्वर भने खुलेको छैन । दुर्घटनाबारे थप बिबरण आउन बाँकी रहेको छ ।